जब सुटिङका बेला बहकिए नायक, १५ पटक ‘कट’ भन्दासमेत मानेनन् | Ratopati
जब सुटिङका बेला बहकिए नायक, १५ पटक ‘कट’ भन्दासमेत मानेनन्
धेरैजसो मूलधारका बलिउड फिल्ममा अन्तरंग दृश्य समावेश गरिएकै हुन्छन् । तर यसको सुटिङ निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छन् । धेरैपटक अभिनेताले सुटिङका बेला आफ्नो नियन्त्रण गुमाउने गर्छन् र निर्देशकले कट भनेपछि पनि अभिनेत्रीलाई छोड्दैनन् । यस्ता घटनाबारे अभिनेत्री आफैंलेसमेत भन्ने गरेका छन् ।
१५ वर्षीया रेखालाई पाँच मिनेटसम्म चुम्बन गरिरहे चर्चित नायकलेः
रेखाको जीवनी ‘ 25 Years ofaSpecial ’ मा एउटा अचम्मको घटनाबारे जानकारी दिइएको छ । लेखक दिनेश रहेजा रेखालाई उद्धृत गर्दै लेख्छन्, ‘मलाई यसबारे केही थाहा थिएन । म अचम्मित भएकी थिएँ । त्यतिबेला मेले जे महसुस गरेँ त्यसलाई केही कुराले पनि क्षतीपूर्ती दिन सक्दैन ।’
विनोद खन्नाले माधुरीसँग मागेका थिए माफी !
डिम्पल कपाडियासँग सुटिङ गर्नेबेला पनि बहकिएका थिए विनोद !
माधुरीसँगको बलात्कारको दृश्यमा बहकिएका थिए नायकः
जया प्रदासँग सुटिङका बेला दिलिपले गुमाएका थिए नियन्त्रणः
निर्देशकले कट भन्दा पनि रोकिएनन् नायक–नायिका
नायक–नायिकाले यस्तो भनेका थिएः
#dimple kapadia#zarine khan#jacqueline fernandez#siddhartha malhotra#rekha#madhuri dixit#vinod khanna#bollywood#bollywood news